Global Voices teny Malagasy » Ao Aostralia, Telo Minitra Isaky Ny Mandeha Hianarana Ny Fiteny Gumbaynggir · Global Voices teny Malagasy » Print
Ao Aostralia, Telo Minitra Isaky Ny Mandeha Hianarana Ny Fiteny Gumbaynggir
Voadika ny 25 Avrily 2016 3:58 GMT 1	 · Mpanoratra First Languages Australia Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Oseania, Aostralia, Fiteny, Mediam-bahoaka, Teratany, Rising Voices
Navoaka voalohany tao amin'ny First Languages Australia  ity lahatsoratra ity, tamin'ny Warra : Building teams, building resources.  (Manangana ekipa, manangana loharanon-karena)
Tenenina mahazatra ao amin'ny faritra amorontsiraka avaratry ny firenena Aostraliana, fantatra ankehitriny hoe New South Wales (NSW), ny fiteny Gumbaynggirr .
Afaka mihaino ny fiteny ireo mponina manerana ilay faritra, tsotra fotsiny, amin'ny alalan'ny fandraisana ny onjam-peo marainan'ny ABC Coffs Coast. Isaky ny Alarobia, mampianatra teny sy fehezanteny ho an'ireo mpihaino sy ho an'ilay mpanolotra ny fandaharana, Fiona Poole , i Gary Williams , mpampianatra fiteny Gumbaynggirr ao amin'ny Fikambanan'ny Teny Teratany sy ny Kolontsaina Muurrbay , ivon-toerana iray ao amin'ny faritra miasa ho fanohanana ireo fitenin'ireo vondrom-piarahamonina Teratany ao NSW. Mandeha amin'ny 7:30 maraina aorian'ny fandefasana ireo vaovao ilay ampaham-pandaharana maharitra 3 minitra.
Sarintanin'ireo fitenim-paritra maro ao amin'ny renirano ao NSW, Aostralia. Sary: Fikambanan'ny Teny Teratany sy ny Kolontsaina Muurrbay
Natomboka ny ampahany Gumbaynggirr tamin'ilay fandaharana anaty onjam-peo rehefa nanatona ny Fikambanana Muurrbay i Poole, naniry mba hanomboka lesona mikasika ny fiteny eo an-toerana ao anaty onjam-peo. Nasain'ny Muurrbay nifandray tamin'i Williams izy, izay nanana traikefa mikasika ny onjam-peon'ny fiarahamonina tany aloha tany.
Liana i Williams saingy tonga saina izy fa tsy dia hifikiran'ny vahoaka loatra amin'ny ankapobeny ny lesona iray lavabe fampianarana fiteny atao anaty onjam-peo. Niarahan'izy sy i Poole nanapaka ny momba ilay halavany 3-minitra isaky ny mandeha. Isan-kerinandro, misafidy ireo teny vitsivitsy fampiasa na fehezanteny iray mba hozaraina amin'ireo mpihaino ny onjam-peo i Williams. Laniana amin'ny fifanakalozandresaka mahakasika tranga andavanandro ny fandaharana hampianarana an'i Poole ireo teny ary hanazavàna ny fampiasàna azy, ny vanimpotoana, ary ireo antsipirihany. Nilaza izy fa manana mpihaino isan-karazany ny fandaharana, sady Gumbaynggirr no sady ihany koa olona hafa avy ao an-toerana.
Tsara ny miverina amin'ireo zava-misy eo an-toerana sady manana vahoaka mbola tsy fahitako mihintsy taloha mahafantatra ahy ary miarahaba ahy amin'ny fiteny Gumbaynggirr. Misy fahalinana tsy mitsahatra mitombo amin'ny fiteninay manerana ny faritra sady hahafahan'ny olona hanomboka fianakalozankevitra iray miaraka amin'ny Gumbaynggirr sy ireo hafa Tompontany eo amin'ny faritra ilay fandaharana. Io no hanombohan'ny fampihavanana. Na any amin'ireo faritra sasany ao Aostralia, tsy irian'ireo any amin'ireo vondrom-piarahamonina ny hampianarana ireo tenindrazany amin'ireo olona hafa ivelan'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo. Ireo mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina Gumbaynggirr dia tsy nametraka olana velively momba ny fananana olona eo an-toerana hianatra ny fiteniny amin'io fomba io. Milaza i Garry fa manana fahatokisana betsaka amin'ilay ivon-toerana mikasika ny fiteny ny vondrom-piarahamonina ary manohana amin'ny ankapobeny ireo tetikasa ampiroboroboiny.
Efa nihodina nanomboka tamin'ny taona 2011 ny ampahana fandaharana anaty onjam-peo Gumbaynggir. Mitohy io noho ny fandraisana andraikitra sy fahalinan'ilay tarika ikambanan'ny olona roa; kanefa, ilay endriny tsotra dia ampy hahafahan'ny olona hafa hanao dingana araka izay ilaina raha tsy eo izy ireo.
Ho an'ireo izay tsy afaka hanaraka isaky ny herinandro, natao ho azo alaina ao amin'ny tambajotran'ny bilaogy ABC eo an-toerana  ireo teny sy fehezanteny vaovao. Misy rohy ny bilaogy mankany amin'ny feo avy amin'i Williams miteny ny fehezanteny sy ny fandikàna azy. Ho an'ireo izay maniry ny hanana ilay ampahany feno telo ministra isaky ny mandeha, dia tsy maintsy manaraka ny fandaharana amin'ny onjam-peo, satria izay zarain'ny bilaogy dia ny santionany kely fotsiny avy amin'ny fandaharana.
Ohatra, ato amin'ity feo eto ambany ity mampianatra ny fomba fiteny ny hoe “Faly mahalala anao” amin'ny fiteny Gumbaynggir i Williams:
Tsy ampianarina fotsiny ao amin'ny onjam-peo ilay fiteny. Na dia misy aza ireo olona vitsivitsy nitmbo tao anatin'ilay fiteny, omena any an-tsekoly ihany koa ireo lesona Gumbaynggirr ary ireo fandaharana ho an'ny vondrom-piarahamonina ataon'ireo mpampianatra matianina toa an'i Michael Jarret, izay voarakitra ao anaty horonantsary ABC OPEN  nalefa etsy ambony ny fanantenany mikasika ny fiteniny.
Nanaporofo fomba iray mahomby hampiroboroboana ny Gumbaynggir ny fiarahana miasa amin'ny onjam-peo sy ny asan'ny Fikambanan'ny Teny Teratany sy ny Kolontsaina Muurrbay  manerana ny faritra, na izany ho an'ireo mpihaino ny onjam-peo, na ho an'ireo mpampiasa aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/25/81686/
 Warra : Building teams, building resources.: http://firstlanguages.org.au/projects/resources.html
 ny fiteny Gumbaynggirr: https://en.wikipedia.org/wiki/Kumbainggar_language
 Fikambanan'ny Teny Teratany sy ny Kolontsaina Muurrbay: http://www.muurrbay.org.au/
 bilaogy ABC eo an-toerana: http://www.abc.net.au/local/stories/2010/07/02/2943206.htm